Mamonjy amin'ny Fahafatesana ny Tompo! | Hevitra MPANOHARIANA |
Mamonjy amin'ny Fahafatesana ny Tompo!
2014-04-06 @ 18:50 in Finoana
Mamonjy amin'ny fahafatesana ny Tompo, izany indray no lohahevitry ny FJKM mandritra ny volana Avrily. Ampifanandrifiana amin'ny Paska izany lohahevitra hotsakotsakoan'ny mpino izany. Ny fahafatesana hamonjena antsika voalohany dia ny fahafatesana ara-panahy.
Ny tsikaritro voalohany tamin'ny namaky ny Ezekiela 18: 23 - 32 dia toy ny hoe solosaina izany ny olona. Toy ny hoe raha nandeha tsara ilay solosaina no tafiditry ny viriosy ka lasa manondrana hatrany noho ny nataon'ilay viriosy dia ratsy izay ilay solosaina. Raha solosaina nanondrana hatrany indray no lasa mandeha tsara tsy misy tomika tamin'ny farany dia lasa tsy tsaroana intsony ny olana taminy teo aloha.
Solosaina no endrika nanoratako azy fa raisina amin'ny mahaolombelona kosa? Tamin'ny taona faha-10 tany an-tsekoly, ny finoana Ejipsiana fahagola dia hoe raha maty ny olona dia lanjaina ny soa nataony ataha amin'ny ratsy nataony. Raha ny soa no betsaka kokoa noho ny ratsy nataony dia mankany amin'ny paradisa izy. Fa raha ny ratsy kosa no betsaka nataony noho ny soa dia lasa any amin'ny fikitroha-nify izy.
Tsy toy izany kosa ny nambaran'i Ezekiela momba ny fijerin'Andriamanitra, raha ny voasoratra eto fa na dia fotoana lava aza ilay olona nanao ny tsara tamin'ny voalohany fa nivadika ôrera kosa izy tamin'ny fotoana farany no maty dia ny ratsy nataony tamin'ny farany no itsarana azy. Dia mifanandrify amin'izany indray, raha nanohitra an'Andriamanitra hatrany ilay olona nandritra ny fotoana lava no niova kosa izy tamin'ny farany ka tsy namerina ny ditra nataony intsony dia, araka ny efa voasoratra momba ilay solosaina teo ihany, tsy tsaroana intsony ny olana teo aminy teo aloha. Rariny sa tsy rariny izany fijerin'Andriamanitra izany?
Raha mbola ilay voalazan'i Ezekiela ihany no itodihana dia mifanohitra amin'ny lojikan'ny olombelona mpiara-belona taminy tamin'izany fotoana izany, ary mety mbola ho lojikantsika amin'izao fotoana izao ihany koa, ny fomba fijerin'Andriamanitra. Lasa tokoa ny saina manao hoe fa maninona i ranona efa nanao ny tsy mety nandritra ny fotoana maharitra indray no "avotan'Andriamanitra" rehefa niala tamin'ny ratsy fanaony izy tamin'ny farany fa nahoana indray no ilay nanao zava-tsoa sy ny marina teo anoloan'Andriamanitra nandritra ny fotoana maharitra no "mba nibolila kely fotsiny" tamin'ny farany no voalaza fa matin'ny fahotany?
Saingy izao, izay no maha-Andriamanitra fitiavana azy. Mbola misy ny fanavotana ho ahy, ho anao, ho antsika na dia difotra tao anatin'ny fahotana aza isika no miova lalana hanaraka ny lalan'Andriamanitra, manaiky ny hotarihan'ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanavotana nataon'i Kristy Jesoa ka ahafahana manova ny lalam-pisainantsika ho marina eo anatrehan'Andriamanitra sy ny olona. Fa Andriamanitra tokoa ninia tsy nijery ny andron'ny tsy fahalalàna; fa ankehitriny Izy mandidy ny olona rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka (Asan'ny Apostoly 17: 30)
Sarotra be ve ilay hiova lalana? Indro Jesoa sy ny zava-nataony mampahery fa na dia toa tsy ho vitan'olombelona aza dia vitan'Andriamanitra kosa. Vakinteny faharoa tamin'ity alahady ity tao amin'ny sahan'ny FJKM ny Marka 5 : 35 - 43. Tantaran'ilay zanaky ny mpanapaka ny sinagoga iray izay maty raha mbola naka an'i Jesoa ny rainy. Misy ny olona miteny hoe "Efa tsy avotra intsony fa aza manahirana olona!" Tsy noraharahian'i Jesoa ilay teny fa niteny tamin'ilay mpanapaka ny sinagoga izy hoe :"Aza matahotra, minoa fotsiny ihany!" Finoan'ny rainy no nanatanterahana ny famonjena na dia miteraka fihomehezana ho an'ny olona aza ny tenin'i Jesoa. Nitsangana razazavavy rehefa nibaiko i Jesoa, "ary niaraka tamin'izay dia talanjona indrindra ny olona",nivanàka nahita ny zavatra tontosa amin'ny famonjen'Andriamanitra. Tsy mijanona hatreo ny asa rehefa vita ny "fahagagana" fa omena hanina ivelomany izay "tsy avotra intsony nefa tafatsagana velona indray". Hamaranana dia mba isika tsirairay no hitsakotsako ny voasoratra ao amin'ny Romana 6 : 1 - 7 ny amin'izay toe-piainantsika rehefa navotan'Andriamanitra isika.
Tsy toriteny tany am-piangonana io fa nosotarako tetoana fotsiny ihany. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra!
Jentilisa, 6 avrily 2014